Aaminaad - Wikipedia
1. Bahaaci, Budhismi, Kao Dai, Masiixiyad
2. Druudismi, Ekaankaari, Hinduuga, Islaam
3. Jainismi, Yuhuuda, Raelismi, Shaydaanimo
4. Shiintismi, Siikhismi, Tayoismi, Tenrikyo,
5. Thelema, Yuyuga, Wiika, Zoroastrismi.
Aaminaad, Diin waa rumaysad awood sare iyo hannaan akhlaaq, ku dhaqan, iyo qaddarin la xiriira rumaysadkaas. Adduunka maanta waxaa laga aaminsanyahay waxyaabo farabadan oo loogu yeedho "[diimo]" laakiin soo hoos gelayaan kuwa badan oo bulsho ama qof sheqsi ah la yimi sida sikh,Hindu,Bahay iwm. Dalka ugu tirakoobka yar xagga diinta waa Shiinaha.
Aaminaad run ah[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Hal aaminaad oo run ah ayaa jirta. Aaminaadaha beenta ahi Ilaahay runta kama sheegaan. Waxyaalaha ay barto waxaa ka tirsan runta ku saabsan nafta iyo rajada nolol weligeed ah oo adduun janno ah lagu heli doono. Diinta saxda ah kama cararto inay daaha ka feyddo beentay diimaha sheegaan. Diinta saxda ah waxay muhimmadda saartaa Boqortooyada Ilaahay oo ah rajada keliya oo binuʼaadanka. Diinta saxda ah waxay inagu guubaabisaa jacayl aan xaasidnimo lahayn. Waxay bartaa in la ixtiraamo qabiillada oo dhan, waxayna soo dhoweysaa dadka jinsi kasta, dhaqan kasta, qowmiyad kasta iyo luqad kasta. Jacayl awgiis, xubnaha diinta saxda ah dagaallo kama qaybqaataan. Diinta saxda ah ma laha wadaaddo lacag lagu masruufo. Dadka ku jirana laguma magacaabo cinwaanno kor u qaado ama kuwa kale ka sarraysiiyo. Diinta saxda ah kuwa ku jira marnaba kama qayb qaataan arrimaha siyaasadda. Diinta saxda ah ma ahan dhaqan ama caado la fuliyo, balse waa hab nololeed. Kuwa diinta runta ah ka tirsan Kitaabka xeerarkiisa sare ayay dhan walba ee noloshooda ku xajiyaan. Caabudaadda “Ilaaha barakada leh” qalbigooda kuma cusla, haddaba farxad weyn bay ka helaan. Kuwa diinta saxda ah ku dhaqmo waxay ku jiri doonaan dadka laga tiro badan yahay. Markayna doonista Ilaahay fuliyaan, badanaa waa la yasaa, waa lagu qoslaa waana la silciyaa. Ilaahay waa mid. Mid la mid ahna ma jiro. Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah. Ilaahay wuu mamnuucay sanam caabudid. Binuʼaadanku waxay arki doonaan maalin la xisaabin doono. Kuwii dhintay in la tirin karin baa Jannada lugu soo nooleyn doonaa. Ilaahay doonistiisa waa binu'aadanku inay weligood dunida ku noolaadaan.
Diinta xaqqa, diimihi hore iyo Calmaaninta[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Tirakoobka dadka aaminsan diinta Islamka waxaa lagu qiyaasa 1,3 bilyan.Tirakoobkan waxaa qorey wadamada reer galbeedka waxaana muuqada inay muslimiintu ka badanyihiin toban al qaeda
Diinti ka horeysey nebi maxamed scw ee Masiixiyada waxaa la sheegaa inay aaminsanyihiin 2,1
Diinti Nebi muuse cs iyada waxaa la sheega inay rumeysanyihiin 13 Milyan oo yahuuda
Calmaaninta iyo diimaha dadku samaystay[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Hindu waxaa la yidhaahdaa dadka caabuda saca ama lo`da oo gaadhaya 900 milyan.
Budhismi waa diin-ku-sheeg uu aasaasay nin magiiciisu ahaa Sidhartha Gautama. Ninkaas dadkiisa waxaa lagu qiyaasa 376 milyan, waxaana deganyihin dalka Hindiya.
Sikh waa diin-ku-sheeg laga haysto wadanka Sri lanka iyo inta soo xigta Sri lanka ee wadanka Hindiya. Sikhismi waxaa la aasaasay 1500 sanadka milaatiga.Sikhitku waxay aaminsanayihiin Ilaahay iyo toban baadderi
Bahay waxaa la aasaasay taarikhda 1700 sanadka milaatiga.Bahay-gu waxay aaminsanyihiin saddex wax:
Midnimada dadka iyo
Sidaas daradeed Quraanka, Injiilka,Tawreedka iyo kulli waxa addunka laga aaminsanyahay ayay isku daran, iyaga oo raba in meel dhexe la iskugu yimaado.
↑ Diimaha oo Dhan Ma Isku Mid Baa? Kulligood Ilaahay May Inoo Geeyaan?
↑ Sidee Baan u Heli Karaa Diinta Saxda Ah?
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Aaminaad&oldid=227510"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 31 Diseembar 2021, marka ee eheed 15:26.